48,000 vatorwa zvisiri pamutemo vanonyangarika mushure mekuburitswa muUnited States
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » 48,000 vatorwa zvisiri pamutemo vanonyangarika mushure mekuburitswa muUnited States
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kutya kwevatorwa zvisiri pamutemo kwakapetwa katatu kusvika pamusoro pemamiriyoni 1.7 mugore rehurumende rakapera munaGunyana 30, 2021, maererano neUS Customs and Border Protection (CBP) data.
Vanoda kusvika 48,000 vatorwa zvisiri pamutemo, vakaburitswa muUnited States na Biden Kutungamira mukati memwedzi mishanu muna 2021, hazvisati zvave kurongeka mushure mekuregeredza kurongeka kwekutarisa nevakuru veUS immigration.
Makumi ezviuru zvevakapinda kunze kwenyika zvisiri pamutemo vakaburitswa muUS pasi pechirongwa chakagadzirirwa kukurumidza kugadzirisa kufambisa kwevanhu vanoenda kune dzimwe nyika.
Pavatorwa vangangosvika zviuru zana nemazana mana vakapihwa zviziviso kuti vataure (NTRs) pakati paKurume 104,000 naNyamavhuvhu 21, 31, vasingasviki zviuru makumi mashanu vakazadzisa chisungo chavo chekupinda nehofisi yevatorwa mukati memazuva makumi matanhatu, sekureva kweDhipatimendi reHomeland Security (DHS). ) data rakauya nezuro.
Vamwe vanopfuura zviuru makumi mashanu nevaviri vakafuratira chisungo chekuzivisa kune Immigration uye Customs Enforuction (ICE), kusanganisira vangangosvika zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu avo mazuva ekupedzisira emazuva makumi matanhatu akange asati apera panguva yakaunganidzwa data.
"DHS data inoratidza tsika yekupa NTRs kwave kutadza kukuru," akadaro Senator weUS Ron Johnson (R-Wisconsin), uyo achangobva kuwana manhamba achipindura tsamba yaakatumira kuMunyori weDHS Alejandro Mayorkas Gumiguru apfuura.
Kushandiswa kweNTRs kwakatanga munaKurume 2021, apo vatorwa vakawanda zvisiri pamutemo vaisvika kumaodzanyemba. US muganhu uyo ​​DHS yaida kurerutsa kuwandirwa munzvimbo dzinovharirwa. Izvi zvisati zvaitika, vanotama vakaburitswa mukati meAmerica kuti vamirire kutongwa kwekudzingwa vakapihwa zviziviso kuti vaonekwe (NTAs). Izvi zvaireva kugadza mazuva ematare evatorwa zvisiri pamutemo, izvo zvaida mamwe magwaro uye nguva yekugadzirisa.
Asi kupihwa NTA kuri kure nekudzingwa, sezvo hurongwa hwekubuda kwevanhu vekuUS hunozivikanwa nekutsigirwa, uye vazhinji vanotama vanongoramba kuuya kudare ravo. Johnson akacherekedza kuti kunyangwe pakati pevanowana zviuru makumi mashanu veNTR vakagamuchira ICE sezvavakarairwa, vasingasviki makumi matatu nenhatu% vakapihwa maNTAs, zvichireva kuti havasati vave nedare redzimhosva riri kuuya uye vanogona kuramba vari muUS zvachose.
Vane zviuru makumi mashanu neina vakashaya NTR vakagamuchira vaive pakati pevatorwa vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu vakaburitswa nehutungamiriri hweBiden. US kubva munaKurume wapfuura kusvika Nyamavhuvhu. Johnson akati avo vanotama vanotarisana nemukana mudiki wekubviswa. Pamusoro peavo vakapihwa maNTA kana maNTR, mazhinji akaregererwa kupinda muUS pasina zviziviso kana mazuva edare.
Kuyambuka miganhu zvisiri pamutemo kwakakwira kusvika kurekodha mushure mekunge VaBiden vatora chigaro muna Ndira wapfuura uye nekukasira kutanga kuburitsa mutemo wevakafanotungamira VaDonald Trump. Kutya kwevatorwa zvisiri pamutemo kwakapetwa katatu kusvika pamusoro pemamiriyoni 1.7 mugore rehurumende rakapera munaGunyana 30, maererano neUS Customs and Border Protection (CBP) data.
Kutya kweCBP kwakakwira kusvika pamakore makumi matanhatu nerimwe mugore rekarenda 61 mushure mekudzika kusvika pamakumi mana emakore pasi pemitemo yaTrump muna 2021.
Huwandu hweCBP hausanganisi nhamba isingaverengeke yevatorwa zvisiri pamutemo vanoyambuka bhodha vasina kubatwa.